“ရှိစေကောင်း၏ ……………မကောင်း၏” | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » “ရှိစေကောင်း၏ ……………မကောင်း၏”
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on Sep 3, 2013 in Creative Writing, My Dear Diary | 22 comments
ကျနော်အဖွားက အ မြင်မတော်တာတွေ့ရင် စကားအခိုင်းအနိူင်းလေးနဲ့ပြောလေ့ရှိပါတယ်။
နေ့လည်နေ့ခင်းမှာ ကျနော်တို့ဦးလေးတွေ အပျင်းဆန့်ပြီးအိပ်ယာပေါ်မှာအိပ်နေရင်၊
“အင်း….. ယောကျာ်းပျင်းကျောခင်း မိန်းပျင်းခြေဆင်း” လို့ဆိုတတ်ပါတယ်။
သူပြောနေတာတောင်မှ အချုိးမပြင်သေးဘူးဆိုရင်
“ ဒီအတိုင်းသာနေလို့ကတော့ ယောကျာ်းဖျင်း ပုလိပ်
မိန်းမဖျင်း ကွိတ်နဲ့တော့ နီးနေပြီနော်” လို့ ဆက်ပြီးပြောပြန်ပါသေးတယ်။
ကျနော်ကငယ်သေးတော့ ပုလိပ်ဆိုတာကိုတော့ သိပေမယ့် “ကွိတ်”ဆိုတာ
“မကောင်းတာလုပ်စားတဲ့ မိန်းမလေ၊ လမ်းထိပ်က မိဦး လိုမိန်းမကိုပြောတာ”
ဆိုပြီး ထင်သာမြင်သာရှိအောင် ဥပမာဆောင်လို့ပြပါတယ်။
ညနေစောင်းဆိုရင် မိတ်ကပ်ထူပိန်းပိန်း နုပ်ခမ်းနီရဲရဲ
ကော့လန်ကော့လန်နဲ့ ခါးလေးရမ်းရမ်းပြီး လမ်းလျောက်တတ်တဲ့
ကွိတ်ဆိုတဲ့ ဘန်းစကားကို အနက်ဖွင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင် စကားလုံးအပွားတွေ
စာသံပေသံနဲ့ပြောရင် ပြည့်တန်ဆာ ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးဆိုရင် မိန်းမပျက်
ခပ်ရမ်းရမ်းပြောရင်တော့ xာသယ် ဇိမ်မယ် လူသိအများဆုံးက ကြက် ဆိုတာကိုပါဘဲ။
သူတို့ကို ပြန်လည်ထိန်းထားတဲ့သူတွေကိုတော့ ဇိမ်ခေါင်း မိန်းမထိန်း xာခေါင်း လို့
ကျနော်စာတွေအငမ်းမရ ဖတ်တဲ့အချိန်မှာ ဆရာကြီးပါရဂူ ဘာသာပြန်တဲ့
အဲဒီအထဲက အမ္ဗပါလီ ကိုဖတ်ရတဲ့ အခါ အတိုင်းအတိုင်းအပြည်အပြည်က
လူတွေခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားလောက်အောင် ချစ်ခင်နှစ်သက်ခြင်းခံရတဲ့ အတွက်
ဂဏှလွှတ်တော်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ အများပိုင်အဖြစ် သတ်မှတ်လို့
တရားဝင်လုပ်ငန်းအဖြစ်သတ်မှတ်တယ် မသတ်မှတ်ဘူးတော့ ကျနော်မသိပေမယ့်
“ဆောင်ကြာမြိုင်မှတ်တမ်းများ”စာအုပ်ထဲ မှာတော့ ရတနာပုံနေပြည်တော်ခေတ်မှာလည်း
ရဲ့အပန်းဖြေရာ နေရာအဖြစ် တည်ရှိနေခဲ့တယ်ဆိုတာသိရပြန်ပါတယ်။
သူ့စာအရဆိုရင် အိမ်ရှေ့စံမင်းသားနဲ့ ပြည့်ရှင်ဘုရင်ကိုယ်တိုင်တောင်မှ
“ကြေးစားမိန်းမ “လို့အမည်ခံပြီး ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အရောင်းအ၀ယ်လုပ်တဲ့အမျိုးသမီး
လွတ်လပ်ရေးရပြီး ကာစ ဗုဒ္ဓဘာသာကို အလေးထားတဲ့အစိုးရ
အုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်မှာတော့ ဒီပြည့်တန်ဆာလူတန်းစား ပပျောက်စေရေး
၁၉၅၀ခုနှစ်ပါတ်ဝန်းကျင်မှာ အခြေခံလူတန်းစားကို ရှေ့တန်းတင်တဲ့ ကွန်မြူစံနစ် ဆိုရှယ်လစ်စံနစ်
မြေရှင်ယာရှင် အရင်းရှင်လူတန်းစားကြောင့်ဘဲ ဒီလိုလူတန်းစားပေါ်ပေါက်ရတယ်ဆိုပြီး
ဘယ်လိုကယ်တင်မယ် ဘ၀တွေဘယ်လိုမြင့်အောင်လုပ်မယ်လို့ အသံကောင်းဟစ်
လူတန်းစားကိုအခြေခံတယ်ဆိုပြီး ဒီလိုပြည့်တန်ဆာလူတန်းစားဆိုတာ မရှိသင့်တဲ့
လူတန်းစားတစ်ရပ်အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး ပပျောက်အောင် နှိပ်ကွပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
ကာလသားရောဂါက ကမ္ဘာမှာ ကပ်ရောဂါဆိုး တစ်ခုလိုကျရောက်လာခဲ့ပါတယ်။
ဒီရောဂါကို ပျံ့နှံ့အောင်ဖြန့်ဝေပေးသူတွေက ဒီပြည့်တန်ဆာတွေက အဓိကဖြစ်တယ်လို့
သတ်မှတ်လိုက်ချိန်မှာတော့ မရှိသင့်တဲ့လူတန်းစားလို့သတ်မှတ်ပြီး ပိုမိုတင်းကျပ်စွာနှိပ်ကွပ်
လည်း တဏှာပေမကို ကျူးလွန်အောင်မြူဆွယ်သူ ဆိုတာသေရင်ငရဲကျမယ်လို့သတ်မှတ်ခဲ့
လူတန်းစားလို့သတ်မှတ်ခံခဲ့ရတဲ့အခါ အများရဲ့ အပယ်ခံ အကျဉ်ခံ ဖြစ်ရုံမကဘဲ
အချို့ကတော့ ဒီလူတန်းစားကို ရှေးဘ၀က ၀ဋ်ကြွေးတွေကြောင့်ဖြစ်ရရှာတယ်ဆိုပြီး
ကိုမင်းနောင်သီဆိုခဲ့တဲ့ “ဂျင်မလေးဂျမ်း”သီချင်းကတော့ လူထုကြားမှာအတော်ပျံ့နှံကျော်ကြား
ခဲ့တဲ့သီချင်းတပုဒ်ဖြစ်သလို ဒီလူတန်းစားတွေကို စာနာမူ့ထားတဲ့စိတ်တွေပေါ်ပေါက်လာအောင်
မတူကွဲပြားသောအမြင်တွေရှိနေကြပေမယ့်လဲ ဒီလူတန်းစားကတော့ ရှိမြဲရှိဆဲပါဘဲ။
ဆိုရှယ်လစ်စံနစ်အောက်မှာ အထွေထွေဆင်းရဲကျပ်တည်းမူ့တွေကြောင့် ဒီလူတန်းစားက
လျော့ပါးမသွားဘဲ အမှောင်ရိပ်အောက်မှာ ပိုမိုကြီးထွားရှင်သန်လာခဲ့ပါတယ်။
ဥပဒေနဲ့ညိစွန်းနေသောလူတန်းစားများ ဖြစ်တဲ့ အတွက် သူ့တို့ဘ၀ရပ်တည်မူ့အတွက်အားကိုးရာ
ဇိမ်ခေါင်းတွေက ဒီလို ကြေးစားမိန်းမများကို အကာအကွယ်ပေးလို့ မြန်မာပြည်အနှံ့အပြားမှာ
သူတွေကတော့ ဥပဒေကို စောင့်ရှောက်ကာကွယ်ဘို့အတွက် ယုံကြည်စွာအပ်နှင်းထားခြင်းခံ
မန္တလေးမြို့ကြီးမှာဆိုရင် မြို့လည်ခေါင်ဈေးချိုဧရိယာမှာတောင် တရားဝင်ဖွင့်ခွင့်ရနေသလို
ပြည့်တန်ဆာအခန်း တွေ ဖွင့်ထားခဲ့ပါတယ်။
အများကြီးရှိနေသလိုစိန်ပန်းမှာ ကျောက်သပိတ်မှာ တက္ကသိုလ်နားမှာ မြို့ပြင်က
သိသာထင်ရှားစွာရော တိုးတိုးတိတ်တိတ်ပါ နိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာပြည့်တန်ဆာအိမ်တွေ
ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာ ကတော့ တကယ့်ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်လမ်းများလို့ပြောနိုင်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် မန်းလေးမြို့ မြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ တောင်ပြုံးဘုရားပွဲကိုအ မှီပြုပြီးကျင်းပတဲ့
မင်းကြီးမင်းလေးရဲ့နတ်ပွဲအချိန်ရောက်ရင် အနယ်နယ်အရပ်ရပ်က ပြည့်တန်ဆာတွေ
လာရောက်ပြီး စီးပွားရှာလေ့ရှိတဲ့ စီးပွားရေးစားကျက်ကောင်းကြီးဖြစ်ခဲ့တာကတော့
အတူ ဘီယာစတေရှင်တွေမှာ အမျိုးသမီးအဆိုတော်တွေထားတဲ့စင်တင်ခေတ်စားလာချိန်မှာ
ဟိုအရင်ခေတ်တွေမှာတော့ တည်းခိုခန်းတွေ ဟိုတယ်တွေမှာပြည့်တန်ဆာတွေကို
နောက်ပိုင်းမှာတော့ ဟိုတယ်မှာ ဒီလိုမွေးမထားတော့ ဘဲ “မာမီကြီး”များက
မာမီကြီးများက သမီးလေးများကို အိမ်တစ်အိမ်မှာနေစရာပေးပြီး စုဆောင်းထားပါတယ်။
အဲဒီအိမ်မှာတော့ အလုပ် မလုပ်ခိုင်းပါဘူး။
ဒါပေမယ့် ဟိုတယ်တွေ တည်းခိုခန်းတွေ ဒါမှမဟုတ် သူ့ရဲ့ဖောက်သည်တွေက နေ
ဖုန်းနဲ့ အော်ဒါလှမ်းတင်တဲ့အခါ သမီးလေးတွေကို ပို့ပေးလိုက်ပါတယ်။
လူမြင်သူမြင်ခံပြီး အိမ်မှာအလုပ်မလုပ်ပေမယ့်လည်း ရပ်ကွက်ထဲကလူတွေကတော့
ဘယ်အိမ်က ဘာလုပ်တယ်ဆိုတာ သိနေကြတာပါဘဲ။
အချို့ကတော့ ကာရာအိုကေခန်းမတွေ မာဆတ် လို့ ခေါ်တဲ့ အနှိပ်ခန်းကို အယောင်ပြထားပြီးပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်ကြပါတယ်။
မန်းလေးမှာဆိုရင်နေ့နေ့ ညည အရှေ့ဘက်ကျုံးနံဘေးနဲ့တောင်ဘက်ကျုံးနံဘေးမှာ ဖောက်သည်စောင့်နေတတ်ကြပါတယ်။
သူတို့နဲ့ ဆက်ဆံနေကြသူများကတော့ အလိုရှိချိန်မှာကားရပ်ဆိုင်ကယ်ရပ်ဈေးစကားပြောလို့တည့်တယ်ဆိုရင်ခေါ်တင်သွားကြ။
ညညဆိုရင် ၈၄လမ်းမပေါ်မှာ ၃၅လမ်းနဲ့ ၃ရလမ်းကြားမှာဆိုင်ကယ်ကို ခေါက်တုံ့ခေါက်ပြန်
ခေါ်မယ့်လူမရမခြင်း လမ်းသလားနေကြတာ မမြင်ချင်အဆုံးပါဘဲ။
အထူးသဖြင့်ဗိုလ်ချုပ်ဈေး မင်္ဂလာဈေး ပန်းဆိုးတန်း ပြည်လမ်းကုန်းကျော်နဲ့
ဖောက်သည်ရှာလို့ မြူဆွယ်နေ နေတယ်ဆိုတာတွေက ပြောပြရရင်
ဒီဘက်ခေတ်မှာ ပိုမိုထူးခြားလာတာကတော့ မိန်းမပြည့်တန်ဆာတင်မကဘဲ
နဲ့ မလွတ်ကင်းသောလုပ်ငန်းလို့သတ်မှတ်ထားပေမယ့် အချို့သောဧည့်ခံပွဲများမှာ
ရေမီးအပြည့်အစုံဆိုတဲ့စကားအတိုင်း ပျော်ပါးဘို့အတွက် ပြည့်တန်ဆာများကို
အခြေခံလူတန်းစားတွေရဲ့ ဘ၀ကြီးသာယာဝပြောရေးကို အခြေခံထားပါတယ်ဆိုတဲ့
ဆိုရှယ်လစ်ခေတ်မှာတောင် ဒီပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းက နိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာရှိနေပါတယ်။
တစ်ခါတစ်ရံ စီမံချက်အရ သတင်းပေးချက်အရ ၀င်ရောက်ဖမ်းဆီးတယ်ဆိုပေမယ့်
ဖမ်းဆီးနိုင်သူကို လာဘ်ပေးပြီး အကာအကွယ်ယူခဲ့ကြပါတယ်။
သာမန်အရပ်သူအရပ်သားတွေတောင်မှဘယ်သူက ဘယ်အိမ်က ဘာလုပ်စားနေတယ်
ဆိုတာကို အလွယ်တကူ သိနေတာတောင် ရပ်ရွာငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် တာဝန်ယူထားကြတဲ့သူတွေက
မသိလို့ မနှိမ်နင်းတာလား ?
မနှိမ်နင်းချင်လို့ မသိချင်ယောင်ဆောင်နေကြတာလား ?
ဆိုတာကတော့ တာဝန်ရှိသူတွေသာ သိနိုင်ပါမယ်။
နာမည်ပျက်တာ မပျက်တာအပထား ဒီလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်နေသူများကတော့
ပျော်ပါးလိုသူနဲ့ရောင်းချင်သူရှိနေတဲ့အပြင် တာဝန်ရှိသူတွေက မျက်ကွယ်ပြုနေ
အကာအကွယ်ပေးနေသမျှ ကာလပါတ်လုံး ဒီပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းကရှိနေအုံးမှာအမှန်ပါဘဲ။
အခုအချိန်မှာတော့ ဒီပြည်တန်ဆာလုပ်ငန်းကို တရားဝင်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုဘို့အတွက်
လက်ခံခမယ် လက်မခံဘူးဆိုတာကို အသေအချာစဉ်းစားရမယ်အချိန်ကာလကိုရောက်
မကောင်းမူ့လို့ ခေတ်အဆက်ဆက်သတ်မှာလာခဲ့တဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခုကို
တရားဝင်လုပ်ဘို့ကို လက်ခံသူရှိသလို ခါးခါးသီးငြင်းပယ်သူတွေလဲရှိနိုင်ပါတယ်။
(၁) စီးပွားရေးကျပ်တည်းလွန်းတော့ ထွက်ပေါက်မရှိုလို့
(၅)သူတစ်ပါးရဲ့ မတရားခိုင်းစေတာ ခံရလို့
ဒီလုပ်ငန်းကို တရားဝင်ခွင့်ပြုမယ် မပြုဘူးဆိုတဲ့အပေါ်မှာတော့ အမြင်အမျိုးမျုိး
အချို့ကတော့ တရားဝင်လုပ်ငန်းအဖြစ်ခွင့်ပြုလိုက်မယ်ဆိုရင် အလွယ်
လမ်းကိုလိုက်ပြီး ဒီအလုပ်ကို လွယ်လွယ်ကူကူလုပ်စားကြမယ်ဆိုရင်ခက်မယ်နော်
မိန်းခလေးပေမယ့်လဲ ကိုယ့်မာနနဲ့ကိုယ် ကိုယ့်သိက္ခာနဲ့ကိုယ်ရပ်တည်နေကြတာဆိုတော့
ဘယ်လိုအခက်အခဲဘဲရှိရှိ ဒါမျိုးတော့လုပ်မစားဘူး ဆိုတဲ့သူတွေလဲအများကြီးရှိတယ်လို့
ရောက်နေတဲ့ မိန်းခလေးတွေမှာ ခေါင်းပုံဖြတ်ခံရတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့
(ဟုတ်တော့လဲ ဟုတ်ပါတယ် အခုချိန်မှာတရားဝင်လုပ်ငန်းမဟုတ်တဲ့အတွက်
အဲတော့ သူတို့ကို အကာအကွယ်ပေးသူ ကလဲ အဆင့်ဆင့်ပေးရကမ်းရတဲ့အခါ
ဘ၀ပျက်တာသာ အဖတ်တင်တယ် ဘာမှ ခံစားခွင့်မရှိတော့ပါဘူး။
၀ယ်သူတစ်ကျပ်ဆိုပေမယ့် ရောင်းလိုက်သူလက်ထဲတော့ တစ်မတ်တောင်
တရားဝင်သာခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင် ဒီမိန်းကလေးတွေကလဲ သူတို့ရသင့်တာကို
ဒါပေမယ့် ပြည့်တန်ဆာအဖြစ်လုပ်ကိုင်မယ့် မိန်းကလေးများကို ဒီအလုပ်က
ကောင်းမွန်သောလုပ်ငန်းမဟုတ်ကြောင်း ဆိုတာကိုတော့ သဘောပေါက်နားလည်
အကြောင်းကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ရင် ကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းက ဒွန်တွဲနေတာအမှန်ပါဘဲ။
တကယ်လို့များ ဒီလုပ်ငန်းကို လုံးဝအစပျောက်သွားအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်
(လက်တွေ့ကတော့ မဖြစ်နိုင်တဲ့ဘက်က %များပါတယ်)
လုပ်နေကြတာ တရားဝင်ပျော်ပါးခွင့်ပေးရင် ပိုဆိုးကုန်မယ်လို့တွေးသူရှိသလို
လူ့စိတ်ဆိုတာ မလုပ်ရဘူးတားမှ ပိုလုပ်ချင်တာ လုပ်ချင်သလိုလုပ်နေချင်သလို
တရားဝင်ခွင့်ပြုလိုက်ရင် သူတို့ကို စံနစ်တကျကျန်းမာရေးဆေးစစ်နိုင်လို့သူတို့ဆီကနေ
မရှိရင် ကူးစက်စရာအကြောင်းကို မရှိဘူး ဒီတော့ ပပျောက်အောင်လုပ်သင့်တယ်လို့
ဒီလိုပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းကိုတရားဝင်လုပ်ငန်းလို့ ခွင့်ပြုလိုက်မယ်ဆိုရင် ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံအနေနဲ့
သိက္ခာကျတာပေါ့လို့ ဆိုသူတွေရှိသလို ဒီလိုလုပ်ငန်းဆိုတာ နိုင်ငံတကာမှာလဲလုပ်နေတာပါဘဲ
အဲ့တော့ ဒီပြည်တန်ဆာလုပ်ငန်းကို တရားဝင်လက်ခံချင်သူ နဲ့လက်မခံချင်သူက
တော့ ကိုယ့်အမြင်နဲ့ကိုယ် မှန်နေကြတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။
ဒီအလုပ်ကိုတရားဝင်ခွင့်ပြုထားတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ အချို့သောမိန်းကလေးတွေက
အချို့ကလဲ ဒီလုပ်ငန်းနဲ့ ကျောင်းစားရိတ်ရှာကြပါသတဲ့။
အဆင်ပြေချိန်မှာတော့ ဒီအလုပ်ကိုစွန့်ခွာပြီး ကောင်းမွန်သောအလုပ်ကို
ပြန်လည်လို့ လုပ်ကိုင်တဲ့အခါမှာမှာ လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းကသူတို့ကို
နှစ်သက်သူနဲ့အိမ်ထောင်ပြုပြီး ဘ၀အသစ်ထူထောင်ကြတာကို လည်း
ကျနော်တို့နိုင်ငံလို အစွဲကြီး တဲ့ နိုင်ငံမျိုးမှာတော့ ဒီလိုဘ၀ပြောင်းလဲလို့လာခဲ့ရင်အတိတ်ဘ၀
ကိုယ့်တူကိုယ့်သား က ဒီလိုမိန်းကလေးမျိုးနဲ့လက်ထပ်ပေါင်းသင်းမယ်ဆိုရင်ကော
ကြည်ကြည်ဖြူဖြူ လက်ခံနိုင်ကြပါ့မလား ဆိုတာကတော့ အဖြေရခက်တဲ့ မေးခွန်းပါဘဲ။။
အလုပ်၊လူအများက မနှစ်မြို့တဲ့အလုပ်ဆိုပေမယ့် ဒီအလုပ်နဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း
ဒီဘ၀ကို မနှစ်သက်ပေမယ့် ပြောင်းလဲမရနိုင်တဲ့အနေအထားမို့ မလုပ်ချင်ဘဲလုပ်နေရသူ
ရှိသလို ဒီဘ၀မှာဘဲပျော်မွှေ့နှစ်ခြိုက်နေသူလဲရှိနေမယ်ဆိုတာကတော့ အတိအကျပါဘဲ။
ဒီပြည်တန်ဆာလုပ်ငန်းက အပြင်လက်တွေ့မှာ ရှိနေတာကို လက်မခံဘူးကွာဆိုပြီးမျက်စေ့စုံမှိတ်ပြီး ဇွတ်ငြင်းနေမကြလား?
ဥပဒေက ခွင့်မပြုလို့ တရားမ၀င်လုပ်ကိုင်စားနေကြ တာကိုအမှီပြု ပြီး လာဘ်စားမူ့တွေ
မသမာမူ့တွေရှိနေတာကို မသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီး ရှောင်လွှဲလို့နေကြမလား?
ပကတိအဖြစ်မှန်ကို သဘောပေါက်လက်ခံပြီး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး
ဥပဒေအခိုင်အမာပြဌာန်းလို့ စည်းနဲ့ကမ်းနဲ့ဖြစ်အောင် ထိန်းကျောင်းပြီးသိက္ခာရှိရှိလုပ်ကိုင်ကြမလား?
ဒါမှမဟုတ် ခက်ခဲဆင်းရဲသူတွေက ဒီမကောင်းမူ့ကို မလုပ်ချင်အောင် ကောင်းကောင်းမွန်
ဒီလုပ်ငန်းမျိုးရပ်တည်လို့မရအောင် ဥပဒေနဲ့ တိတိကျကျ ထိန်းချုပ်ပြီး လုံးဝကွယ်ပျောက်သွားအောင်လာဘ်မစား ဘဲ အကောင်အထည်ဖော်ကြမလား?
ဆိုတာကို ပြတ်ပြတ်သားသား ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ရမယ်အချိန်တော့ ရောက်နေပြီဆိုတာကို
ပြည့်တန်ဆာကို အခေါ်အဝေါ် အမျိုးမျိုးခေါ်ကြတာကြားဖူးပေမဲ့
ကိုပေါက်အတွေးပါးပါးကလည်း မပါးပဲ ထူနေလို့ ဘယ်လိုတွေးပြီးအဖြေပေးရမယ်မသိဘူးဖြစ်နေတယ်…
မသမာမူ့တွေရှိနေတာကို မသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီး ရှောင်လွှဲလို့နေကြမလား?……
တကယ်ခန္ဒာရင်းရသူထက် ခေါင်းတွေ၊ ရဲတွေက ပိုထောနေတာပါ..
ဒီလုပ်ငန်းက အလွန်တင်းကြပ်တဲ့ အာရပ်တိုင်းပြည်များမှာတောင် တိုးတိုးတိတ်တိတ်နဲ့ ရှိနေပါတယ်…
စင်ကာပူမှာကတော့ မီးနီရပ်ကွက်ကို တရားဝင် လိုင်စင်ချပေးပြီး ၂ပတ် ၁ခါ ဆေးစစ်ရသတဲ့…
အဲဒါတောင်မှ လမ်းဘေးမှောင်ခိုတွေက ရှိတုန်းဆိုပဲ၊ ကျန်တာတော့သိပ်မသိ…
ဒီမှာက လုပ်စားတဲ့သူကို ထပ်လုပ်စားလို့ရအောင်ဖန်တီးပေးထားသလိုဖြစ်နေလို့ပါ။
ဥပဒေအခိုင်အမာပြဌာန်းလို့ စည်းနဲ့ကမ်းနဲ့ဖြစ်အောင် ထိန်းကျောင်းပြီးလုပ်ကိုင်ကြ မယ်ဆိုရင်တော့ ကောင်းမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ခေတ်အဆက်ဆက် နှိမ်နင်းမှုတွေရှိခဲ့ပေမယ့် ပပျောက်သွားတာမျိုး မဖြစ်မယ့်အတူတူ ဒေသနေရာကန့်သတ်မှုနဲ့ တရားဝင်သာသတ်မှတ် ပေးတာပိုကောင်းမယ်ထင်မိပါရဲ့
ခိုးစားရတဲ့အသီးက ပို ချိုသတဲ့
တရားဝင် ပေါ်ပေါ်ထင်ထင် လုပ်ပေးလိုက်ရင် တောင်မှ မှောင်ခိုဈေးကွက်က ပျောက်ဦးမယ် မထင်
ဒါပေမင့် လက်ရှိ အခြေအနေထက်တော့ ပိုပြီး ကောင်းလာနိုင်ချေ ရှိတာမို့
တရားဝင် သတ်မှတ်သင့်တယ်လို့ တွေးမိသဗျ။
ဒေသနဲ့ပဲ ခွဲခွဲ နေရာတိုင်းပဲ ပေးပေး ပေါ့
တရားဝင်ဥပဒေပြုလိုက်ရင်.. တရားဝင်အထုတ်ဖြေသလိုဖြစ်မှာစိုးလို့.. လို့ထင်တာပဲ..
အခုက.. မြန်မာတွေဆိုတာ.. အင်မတန်ယဉ်ကျေး.. . ဘုရားနဲ့..တရားနဲ့..စသဖြင့်.. ကမ္ဘာတန်းမှာမိတ်ကပ်(အပေါစားလေးလိမ်း) ပုံသွင်းပြထား(ချင်)တာကိုး..
သနားတယ်.. သနားတယ်..။ “ဖာဖုံး”များကိုသနားတယ်..
မှတ်ချက်။ ။ ရှိနေသည့် ဖာသည်များကို.. မရှိချင်ယောင်ဆောင်ကာ ဖုံးကွယ်ထားကြသူဥပဒေပြုသူများ..
နိုင်ငံတိုင်းမှာ ကိုယ့်နိုင်ငံသိက္ခာမကျအောင်ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ ပြဿနာတွေရှိစမြဲပါဘဲ။
တရားဝင် ဥပဒေပြဌာန်းတာကိုပဲ ထောက်ခံပါတယ်။ သမားရိုးကျ အခေါ်အဝေါ်ကိုလည်း ပြောင်းစေချင်ပါတယ်။ နှိပ်ကွပ်ထားသလိုဖြစ်တဲ့ အခေါ်အဝေါ်၊ (ပြည့်တန်ဆာဆိုတာ မူလအမည်လှပေမယ့် လူတွေရဲ့အသိထဲမှာ မကောင်းတဲ့သဘောရှိနေပါတယ်။) -ာသည်၊ ကြက်၊ အဲဒီလို အခေါ်အဝေါ်တွေကို ပြောင်းပြီး ဥပမာ ရမ္မက်ကုန်သည် (ဥပမာ ပြောတာပါ) စသည်ဖြင့် ပြောင်းပြီး တရားဝင် လုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင်ချပေးသင့်ပါတယ်။ တကယ်ဆိုရင် သူတို့အဆင့်က မနိမ့်လှဘူး။ အနည်းဆုံး ရုပ်ရည်ရှိဖို့တော့လိုတယ်။ ဒီ့ထက်အဖြစ်ဆိုးတဲ့လူတွေ ရှိနေသေးတာ။
အခုဆိုရင် လုပ်ငန်းတွေမှာ ၀န်ထမ်းတွေရဲ့ ရာထူးကို အင်္ဂလိပ်နာမည်သုံးပြီး ခေါ်ကြတယ်။ အဲဒီတော့ အလုပ်ရဲ့သဘောက အဆင့်ရှိသလို ဖြစ်သွားတယ်။ အဲဒါမျိုးကိုပြောတာပါ။ -ာသည်တွေကို နှိပ်ကွပ်ထားတဲ့ အခေါ်အဝေါ်ကို လုံးဝပြောင်းပြီး တရားဝင်ကို လုပ်ခွင့်ပေးမှ အမျိုးသမီးဘ၀ မြှင့်တင်ရာကျမှာပေါ့။
တရားဝင်တာလိုလို မ၀င်တာလိုလို နဲ့ ခေါင်းပုံဖြတ်ခံနေရမယ့်အစား တရားဝင်ဖြစ်တာကို သဘောကျပါတယ်။
မကောင်းမူ့လို့သတ်မှတ်တဲ့အလုပ်ကို လုပ်စားတာမှန်ပေမယ့် အခေါ်အဝေါ်လေးကကတော့
မန်းလေးမှာတော့ အဲလို့ မိန်းကလေး ဖောက်သယ်ခေါ်လို့လိုက်သွားရင် အော်ဒါ ရတယ်လို့ပြောကြပါတယ်.။
အော်ဒါမယ် လို့ ခေါ်ရင်မကောင်းဘူးလားဗျို့။
လေးပေါက်ကြီးနဲ့ ကျမ အဲဒီမှာ တွေးပုံချင်း မတူပြန်ဘူး။ အဲဒီအလုပ်ကို ကျမက မကောင်းမှုလို့ကို မထင်တာ။ သမ္မာအာဇီဝ အလုပ်လို့ကို ကျမ ထင်တယ်။ အပြစ်ထောက်မယ်ဆိုရင် အလုပ်အမျိုးအစား နိမ့်တာတစ်ခုပဲရှိမယ်လေ။ ဒီအလုပ်က ရုပ်ရည်ရှိဖို့လိုတယ်၊ တခြားဝန်ထမ်းတွေလို အထက်က အမိန့်အတိုင်းလုပ်ရတာမဟုတ်၊ ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်းနဲ့ ဖောက်သယ်ကို ထိန်းထားရတယ်။ ကိုယ်စွမ်းကိုယ်စကို သုံးရတယ်။
ဟိုတုန်းက သင်္ဘောဆိပ်မှာဆိုရင် ကူလီတွေ အများကြီးပဲ။ ခုတော့ အဝေးပြေးဂိတ်မှာ။ ဒါပေမယ့် သူတို့ကို ကူလီ လို့မခေါ်ကြတော့ဘူး။ ကားဂိတ်ဝန်ထမ်းလို့ခေါ်ကြတယ်။ ခရီးသည်ရဲ့ အထုပ်အပိုးတွေ ဆွဲပေးတဲ့လူတွေကို ပြောတာ။ နေအိမ်မှာဆိုရင်လည်း ဟိုအရင်က အစေခံ၊ အိမ်စေ၊ စသဖြင့်ခေါ်ကြတယ်။ နောက်တော့ အိမ်ဖော်၊ အိမ်ကူလို့ ပြောင်းခေါ်ကြတယ်။ စိတ်ထားကောင်းတဲ့ အိမ်ရှင်တွေဆိုရင် အိမ်ဖော်ကို တူမ၀မ်းကွဲလေးပါလို့ ပြောကြတယ်။ အိမ်ကားမောင်းတဲ့လူကို ဒရိုင်ဘာ လို့ အရင်ကခေါ်ကြတယ်။ ခုတော့ ကားဆရာလို့ ခေါ်ကြပြီ။ အခေါ်အဝေါ်ပြောင်းတာ အလုပ်ရဲ့သဘောသွားပါ ပြောင်းသွားသလိုပဲ။ ဒါကြောင့် သူတို့လို အဆင့်ပိုမြင့်တဲ့အလုပ် ( ရမ္မက်ဝန်ဆောင်မှု) လုပ်နေတဲ့မိန်းကလေးတွေကို အခေါ်အဝေါ် သေချာ ပြောင်းသင့်ပါပြီ။ အော်ဒါမယ် လည်းကောင်းပါတယ်။ ဒီ့ထက် နည်းနည်းပိုမြင့်ရင် ကောင်းမလားပဲ။ စပါယ်ရှယ်စကားလုံး ထွင်သင့်ပါတယ်နော်။ အဲဒါဆို မြန်မာလူမျိုးတွေလည်း အမြင်နည်းနည်းပြောင်းသွားနိုင်တယ်။
ရမ္မက်ဆိုတဲ့စကားလုံးကလဲ မြန်မာပြည်အဘို့တော့ မကောင်းသောအနက်ကိုဆောင်တဲ့စကားလုံးပါဘဲ။
ကိုပေါက်ရဲ့ အတွေးထူထူတွေ ဖတ်ပြီး ဦးဏှောက်စားသွားပြီ။
အချက်အလက်စုံစုံလင်လင်နဲ့ ရေးထားတာတွေကို ပြန်ပြောချင်ဆွေးနွေးချင်တာတွေ အများကြီးပဲ။
ခုလတ်တလော Debate ကို အားသန်နေတယ်။
ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ Debate လုပ်ကြမလားးးးးးးးးးးးး
မမရေ ကျနော်တို့က ပြဿနာတစ်ရပ်ကို ထိပ်တိုင်ရင်ဆိုင်ပြီး ဖြေရှင်းရတဲ့ အချိန်ရောက်နေပါပြီ။
စက်တင်ဘာ ၅ ရက် ညနေ ၃း၁၄ – မတွေ့ပါလား။
ကိုခရေ ဒီနေ့ကတော့ လမ်းပေါ်မှာ တနေ့လည်ခင်းလုံးကုန်တာပါဘဲ.
ကျွဲဆန်ကန်နဲ့ 15လမ်း ငွေသွားကောက်နေရာတာဗျာ
ခင်ခ ၂၁ ရက် ပိုမိုရှင်းအတွက် ရဲရဲတောက်တွေကို လာဝင်ကြည့်လို့ မတွေ့တာပြောတာပါ ကိုပေါက်ရေ။
၃ ရက်နေ့ကတင်တဲ့ပိုစ့်တွေ ဒီနေ့ ၃ ရက်မြောက်လေဗျ